Shily : Namono Sy Nandrava Ilay Ala Nirehitra Tany Valparaíso · Global Voices teny Malagasy
Shily : Namono Sy Nandrava Ilay Ala Nirehitra Tany Valparaíso
Voadika ny 24 Avrily 2014 2:55 GMT
FANITSIANA: Araka ny tatitra nataon'ny gazety Shiliana El Mercurio [es], tamin'ny harivan'ny Alatsinainy 14 Aprily dia 15 no maty, 11.000 tsy manan-kialofana ary velaran-tany 1.140 hektara no kilan'ny afo , trano maherin'ny 2.500 no may araka ny vinavinan'ny manampahefana.
Tamin'ny alin'ny Sabotsy 12 Aprily, trano maherin'ny 500 tao amin'ny havoana amin'ny tanàna amorontsirak'i Valparaiso any Shily no kilan'ny afobe tsy nisy tahaka izany. Nanapa-kevitra ny mpitondra mba hamindra toerana ireo olona 3.000 ary naniraka ny tafika ho any amin'iny faritra iny mba hanampy amin'ilay loza.
Tamin'ny alatsinainy 14 Aprily, trano 2.000 no kilan'ny afo ary olona 17.000 no nafindra toerana. 12 no maty ary 8.000 no tsy manan-kialofana noho ilay afo. Mbola niasa nanao izay hifehezana ny afo izay mbola nihanaka tamin'ny havoanan'ny fitodian-tsambo ireo ekipan'ny mpamonjy voina tamin'ny 15 Aprily 2014. Faritra iraikambin'ny folo no tratran'ny afo ary velaran-tany 850 hektara no may.
Sary ahitana ny momba ilay afo, aparitaky ny [es] El Mercurio.
Ao Valparaiso no misy ny kongresy nasionalin'i Shily sy ny iray amin'ireo fitodian-tsambo lehibe ao amin'ny firenena. Nambaran'i UNESCO tamin'ny 2003 fa toeran'ny harenan'izao tontolo izao ity toerana manan-tantara ao amin'ny tanàna izay misy mponina 250.000, tsy tratry ny afo io faritra io.
Ambaran'i Angélica Mora ao amin'ny bilaoginy Notes from a Reporter ( Rakitra avy aminà mpanao gazety) [es], ny nanombohan'ny afo ary manome vaovao misimisy kokoa izy :
Nanomboka tamin'ny firehetan'ny ala tao amin'ny làlan'i La Pólvora izay nandrakotra velaran-tany 270 hektara ilay loza, saingy nisy rivotra mahery nampihanaka azy ho any amin'ilay havoana be mponin'i La Cruz, El Vergel, Las Cañas ary Mariposas.
Andrin-tsetroka matevina, izay niteraka olana ara-pisefoana, indrindra tamin'ny ankizy sy ny antitra, no tazana hatrany amin'ny 10 km mahery. Mpamono afo avy amin'ny faritany enina, mpitandro filaminana ary hatramin'ireo ekipa an'habakabaka sy ety an-tanetin'ny Sampan-draharaham-pirenena momba ny Ala sy ny birao nasionalin'ny mpamonjy voina no niasa namono ny afo nanomboka ny sabotsy taorian'ny tamin'ny 4 ora hariva ary nitombo arakaraky ny fioson'ny tolakandro.
Matetika vita amin'ny fitaovana mora may, izay rehefa ampian'ny rivotra dia mitera-doza, ny ankamaroan'ny trano onenan'ny mponina 250.000 any Valparaiso, nefa tsy mbola nisy tahaka ity.
Sary ao amin'ny Flickr avy amin'ny mpisera retoricaca (CC BY-NC 2.0)
Nangataka fanampiana ho an'ireo tra-boina ny 4320 blog [es] :
Ireo fitaovam-piasàna entin-tànana, ny baoty sy ny fiaro tànana. Aro loha. Akanjo fiarovana misy tamberin-kazavana. Borety. Vy ho anà fanorenana. Vy miolana. Sakafo tsy mety simba. Lamban-jaza sy ho an'ny lehibe. Fitaovana handriana. Rano. Trano fidiovana. Akanjon'ankizy (mbola tsara). Fitaovana fampiasa ao an-trano. Fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy ary fitaovana hafa izay heverinao fa ilaina.
Mandritra izany fotoana izany no nizaran'i ARG Noticias [es] ny tenin'ny Filoha Michelle Bachelet:
Nosokajian'ny Filohan'i Shily, Michelle Bachelet, ho ” ny afo ratsy indrindra teo amin'ny tantaran'i Valparaiso” iny loza iny ary ahiany fa mbola mitombo ny isan'ny maty arakaraky ny androsoan'ny ora. Nambarany ihany ko any fampiatoany ny fandehanany any Arzantina izay voaomana hanomboka ny ampitso [ Talata 15 Aprily] mba hahafahany mivory miaraka amin'ny governemantany sy hamaritra fitantanana “mahomby” ho an'ny fitodian-tsambo. Notarihan'ny Filoha ny komitin'ny vonjy taitra ao amin'ny tanànan'ny fitodian-tsambo omaly [ Alahady 13 Aprily] tolakandro, sy ny famangiana ireo toby roa fialofana nametrahana ireo tra-boina ao amin'ny fiangonan’ i San Juan Bosco sy ny sekoly Gaspar Cabrales.
Marobe ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Twitter, toy ity an'i BioBio Chile ity, mizara ny tantaran'ilay mpamono afo an-tsitrapo iray :
[PHOTOS] Fijoroana vavolombelon'ilay mpamono afo an-tsitrapo, maherifon'ny afo mahery vaika tany Valparaiso.
Ireto ihany koa misy fanavaozam-baovao momba ny afo :
Efa nihena ny herin'ny afo fa misy toerana telo mbola tsy maty ny afo any Valparaiso.
Mety ho 20 andro vao maty ny afo any Valparaiso hoy ny fampitandreman'ireo mpamonjy voina Shiliana.
Miantso ireo mpiara-miasa mba hifanampy aminy amin'ny famonjena ireo tra-boina noho ny #afo any Valparaiso ny fikambanan'ny mpitsabo.
Etsy andanin'izany, misy vaovao hafa notaterina mifandraika amin'ny afo :
RT! Eto no toerana izay azonareo hanaterana ireo fanomezana hanampiana ireo tra-boina noho ny afo tany Valparaiso.
Nokarakarain'ireo tanora mpitsabo biby ireo biby fiompy tratra ny afo tany Valparaiso.
Niafara tamin'ny daroka tsy misy indra fo nanjo ilay mpanararaotra ny fanolanana ankizivavy tao afovoan'ny afo tany Valparaiso.